Ngabe umvini wedayimane usengcupheni yezentengiselwano yomphakathi? | Martech Zone
Ngenkathi ngise- IRCE, Ngangijabule kakhulu lapho isikhulumi esisodwa, uDanny Gavin, singimisa sangitshela ukuthi singibonile ngikhuluma eminyakeni eyedlule emcimbini owawuse-Austin. UDanny ungomunye wabakhangisi abaphezulu be-Intanethi… ukuthuthukisa ukumaketha kwe-Intanethi okunamandla nemikhankaso yemidiya yokuxhumana nabantu UBrian Gavin Diamonds. Ngobungcweti bakhe, usizwe ukuqhubekisela phambili i-BGD ezinhlwini ze-Internet Retailer's Top 1000 and 50 Fastest Growing E-Commerce Companies.
Sizokwabelana ngokumangalisayo Umvini we-BGD ama-loops kukho konke lokhu okuthunyelwe okuvela kuBrian Gavin Diamonds, ukubeka okubonwayo ukuthi basisebenzise kanjani ipulatifomu.
Kusuka ku-Idea kuya ku-Design
Ngabuza uDanny ukuthi kungani ayekhona wangitshela ukuthi ubekhuluma ngempumelelo emangalisayo uBGD abe nayo iza. Futhi asikhulumi izinombolo ezincane lapha:
Isebenzisa abagqugquzeli beVine, i-BGD ikwazile ukufinyelela ngaphezulu kwama-loops ayizigidi eziyisithupha kuVine (okungabantu abacishe babe yizigidi ezimbili) kanye namasheya angaphezu kwama-6 ku-Twitter.
Umkhankaso wabo weVine uthole ukuqashelwa okuphezulu okuvela ezincwadini eziningi, kanye nokubekwa ohlwini # 2 kuphela ngemuva kukaTiffany wemikhankaso yokukhangisa yezitolo zobucwebe ngo-2014 (JCK).
Ngaphandle kokwehla kokuthengiswa kwabancintisana phakathi kukaBlack Friday noKhisimusi, i-BGD ithole irekhodi lokukhula kwe-45% YOY kanye nokukhula kwe-13% YOY ku-Q1 ka-2015.
I-BGD iphinde yabona ukwanda okuphawulekayo kwe-20% yomgwaqo oqonde ngqo kuwebhusayithi kusukela engxenyeni yokuqala yonyaka ka-2014.
Lowo akuwona umsebenzi olula unikezwe umncintiswano onolaka kule mboni. UBrian Gavin Diamonds iyi-tailer e-tailer ozixhasa ngayo ngemali elwela ukukhulisa ukuqwashisa ngomkhiqizo online ngenkathi incintisana nezabelomali ezinkulu zezimbangi zayo.
Inselelo ukuthi i-BGD ibidinga ukuthola indlela engabizi kakhulu yokuncintisana nalabo esincintisana nabo ku-inthanethi nabasendaweni ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana ezokwakha ubuwena bomkhiqizo nokwandisa ukuthengisa.
Isu likaDanny kwakungukwenza ikhalenda yokuhlela eguquguqukayo evumela i-BGD ukuthi isebenzise imicimbi efike ngesikhathi futhi efanele ngokukhipha ama-video amasonto onke ajabulisayo futhi ahlekisayo kungxenyekazi enokwabiwa kakhulu.
Bathuthukise imiqondo ezungeze ikhalenda lethu lokuhlela, bakhiqiza okuqukethwe kwamavidiyo, futhi bakukhuthaza ngeziteshi zabo zemithombo yezokuxhumana nangabathonya beVine abafinyelela kubo.
Ithoni nokusondela komyalezo wokudala bekungukuvumelanisa ukuba khona kwethu ku-inthanethi nesithombe sethu singaxhunywanga ebuhleni nasemisha. Ukuze sikwazi ukuqhudelana nalabo esincintisana nabo kakhulu besabelomali, besidinga ukukhetha indlela ababhekiswe kuyo (18-44), kepha lapho esincintisana nabo babengekho.
Ngokusebenzisa iVine, i-BGD ayikwazanga kuphela ukungena kuzithameli ezincane (18-20) epulatifomu, kepha nezithameli ze-Twitter (18-49) ngenxa yokwabiwa okuphezulu nokuhlanganiswa kwalezi zingxenyekazi ezimbili. Okuqukethwe kucacile, kuyathakazelisa, futhi kuyingqayizivele, kepha kuhamba ngokushesha okukhulu ukufuna umbukeli ukuthi akubuke futhi.
Umhlaka 4 kuJulayi
Lezi zinhlobo zamavidiyo zixhuma kwisizukulwane esingumahambanendlwana (esibheke kubantu asebekhulile abafunde kakhulu) futhi zimfushane ngokwanele ukuphazamisa nokufundisa ngaphandle kokuchitha isikhathi sababukeli. Le ndlela nethoni kwakusebenza kahle ekushayeleni ithrafikhi kuwebhusayithi kanye nasekuthengiseni ukushayela.
Sibonga ngokukhethekile kuDanny ngokungisiza ngihlanganise lokhu okuthunyelwe! Qiniseka ukuthi uvakashela UBrian Gavin Diamonds ngokwezifiso zakho zobucwebe!
Tags: amadayimane ka-brian gavinucwaningo lwesigamekodanny gavinezentengiso yenhlaloezokuhweba ngomphakathiNgifikileimikhankaso yomviniisifundo secala lomviniukuhweba ngomviniizihibe zomviniimiphumela yomvini